Dhacdo aan ka Salguurin Maankayga Qallinkii: Mustafe Muxumed Cadde. |
Dhacdo aan ka Salguurin Maankayga Qallinkii: Mustafe Muxumed Cadde.
Waxaan aad uga xumahay in wakhtigan aan ku jirto aan arko askariga si arxan daro ah ugu ulaynaya gabadh ardayad ah oo xidhan dirayska lagu yaqaanay ardayda, islamarkaana aan gacmaha wax danbi ah kula jirin wakhtigaas . Dhacdadan ayaa ka dhacday dawlada hoose ee Gabiley horteeda maalintii salaasadii kuna taariikhaysanayd 22/10/2019.
Wuxuu damiirkaygu diiday in aan daawado ardayd ah mustaqbakii barito una baahan in lagu hago hilinka toosan in si bin-aadamtinamada, sharciyadda, dhaqankeenna suuban iyo diintaba ka baxsan uu u jiidjiido asakri boolis ah oo ka tirsan saldhiga degmada Gabiley. waayo gabdhuhu waxay inaga mudan yihiin ixtiraam iyo qadarin dhinac kasta oo ay noqoto balse ma garanayo askarigaa halka loogu soo dhigay dhaqankaas ka aradan diinteena iyo dhaqankeena suuban.
Waxaan aad uga xumahay in aan askarigaa aan la anshax marin ilaa imika balse taliyihiisu ku taageersan yahay dhacdada u sameeyay.
Dhacdadani waxay ina xasuusinaysaa taariikh hore oo xun oo dalkani soo maray oo aabayaasheen ka gilgisheen balse maanta damiirkayagu na siin mayo in aan daawano hablahayagii oo askarigtii suuqa dhexdiisa ku jidh dilayo.
Waxaan uga baaqayaa dhamaan cuqaasha, odayaasha, culimada iyo dadkii dhacdadaa dawlada hoose ee Gabiley ka dhacday arkayayba in ay si wadajir ah uga hadlaan oo ay u gudbiyaan in talaabo sharci laga qaado askarigaas.
Mustafe Muxumed Cadde.